ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပညာရေးအကောင်းဆုံးနိုင်ငံများ | Edge.com.mm : Best Education Guide in Myanmar
ကဲ...ဒီတော့PISA Rankings 2015 အရ ပညာရေးတွင် အကောင်းဆုံးနိုင်ငံများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
- စင်္ကာပူနိုင်ငံက PISA 2015 ဇယားမှာ ဘာသာရပ်သုံးခုလုံး (သင်္ချာ၊ သိပ္ပံ၊ စာဖတ်တတ်မှု) ထိပ်ဆုံးကနေ ရပ်တည်နေပါတယ်။
- အာရှနိုင်ငံငယ်လေးက ပညာရေးအဆင့်အတန်းမြင့်မားမှုနဲ့ နာမည်ရှိပြီးတော့ အထူးသဖြင့် သင်္ချာမှာ ရလဒ်အကောင်းဆုံး ထွက်ရှိပါတယ်။
- ဒီကကျောင်းသားတွေက အတန်းတစ်တန်းလုံးအနေနဲ့ ပုစ္ဆာတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကို သင်ပေးတဲ့ သင်ကြားမှုဖြစ်တဲ့ “Mastery Method” နဲ့ သင်္ချာသင်ယူရပြီး အဲ့ဒီနည်းလမ်းက ပိုပြီးသမာရိုးကျဆန်တဲ့ ဖော်မြူလာတွေ အလွတ်ရွတ်ရတဲ့ သင်ကြားမှုကနေ ခွဲထွက်ပါတယ်။
- ဆရာတွေ ခန့်အပ်တဲ့အခါမှာလည်း ထိပ်ဆုံး ၅ ရာခိုင်နှုန်း ဘွဲ့ရတွေကနေ ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပြီး ဆရာတွေကလည်း လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အရှိန်အ၀ါကြီးသူများအနေနဲ့ အသတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။
- ဂျပန်ကကျောင်းတွေကတော့ သိပ္ပံမှာ ဒုတိယချိတ်ပြီး၊ သင်္ချာမှာတော့ ကမ္ဘာမှာ နံပါတ် ၅ နဲ့ စာဖတ်စွမ်းရည်မှာတော့ နံပါတ် ၈ နေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။
- ဂျပန်နိုင်ငံက ဂဏန်းသင်္ချာနဲ့ ပထ၀ီဝင်တွေမှာ အများဆုံးအသားပေးထားတာဖြစ်ပြီး Illiteracy Rate0အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ထားတဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးပညာရေးကို ရရှိထားတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲက တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
- ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးက ကလေးတွေအနေနဲ့ ပုံမှန်ဆိုရင် အက္ခရာပေါင်း ၂၆ နဲ့ ၃၃ လုံးကြားသင်ယူနိုင်ပြီး ဂျပန်ကျောင်းသားတွေကတော့ သူတို့မူလတန်းအောင်ချိန်မှာ ကန်ဂျီ (Kanji) အက္ခရာပေါင်း ၁,၀၀၆ လုံးကို သိပြီးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
- “New Finland” လို့ တချို့ကခေါ်ကြပြီး အက်စ်တိုးနယားကတော့ ကမ္ဘာ့အသက်အငယ်ဆုံးနိုင်ငံတွေထဲက တစ်ခုအပါအ၀င် ဖြစ်ပေမယ့် PISA Rankings ရဲ့ ထိပ်ဆုံးကို အလျှင်အမြန်ပဲ ရောက်ရှိလာပါတယ်။
- အက်စ်တိုးနယားက ဂျီဒီပီရဲ့ ၄ ရာခိုင်နှုန်းကို ပညာရေးအတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
- ထိုင်ဝမ်က နည်းပညာအဆင့်အတန်းမြင့်မားမှုရဲ့ ဗဟိုချက်အဖြစ် ဆယ်စုနှစ်များစွာ နာမည်ရှိခဲ့ပြီး အဲ့ဒီကကျောင်းသားတွေက နည်းပညာ၊ သင်္ချာနဲ့ သိပ္ပံတွေမှာ စဉ်ဆက်မပြတ် ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါတယ်။
- အသက် ၆ နှစ်အရွယ်မှာ မဖြစ်မနေ ပညာစသင်ယူကြရပြီး အသက် ၁၅ နှစ်အထက် ပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်သူကတော့ ကျောင်းသားအားလုံးရဲ့ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရှိပါတယ်။
- ဖင်လန်နိုင်ငံက ကလေးတွေက အသက် ၇ နှစ်အောက်မှာ ကျောင်းစတက်တာမျိုး မလုပ်ကြပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာမှာတော့ အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေ စဉ်ဆက်မပြတ်ထွက်ရှိအောင် လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ - နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ်က ကစားချိန်နဲ့ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုအတွက် သင်ကြားမှုအပေါ် အလေးထားတဲ့အတွက် OECD နိုင်ငံတော်တော်များများရဲ့ ချဉ်းကပ်ပုံနဲ့ နည်းနည်းကွဲပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေက သူတို့အသက် ၁၆ နှစ်မတိုင်ခင်မှာ ဘာစာမေးပွဲမှ မရှိကြပါဘူး။
၆. မကာအို (တရုတ်)
- မကာအိုက ကျောင်းတော်တော်များများက ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေ ဒါမှမဟုတ် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေ ရရှိကြတဲ့ ကျောင်းတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
- အစိုးရကျောင်းတွေ စတိတ်ကျောင်းတွေက နည်းနည်းလောက်ပဲရှိကြပြီး အဲ့ဒီကျောင်းတွေမှာ ပေါ်တူဂီဘာသာနဲ့ သင်ကြားကြပါတယ် သို့မဟုတ် ဘာသာစကားသင်ယူမှုအပေါ်ကို အများကြီး အလေးပေးကြပါတယ်။
- ကျောင်းအများစုကလည်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘာသာရပ်တွေထက် (vocational subjects) ဘာသာစကား၊ သင်္ချာနဲ့ သိပ္ပံဘာသာရပ်တွေအပေါ်မှာ များစွာဗဟိုပြုထားတဲ့ selective grammar schools တွေဖြစ်ကြပါတယ်။
၇. ဟောင်ကောင် (တရုတ်)
- အရင် UK ကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဟောင်ကောင်ပညာရေးက အရင်ကဆိုရင် ဗြိတိန်ပညာရေးစနစ်ပုံစံနဲ့ အနီးကပ်ဆုံးတူအောင် ပြုလုပ်ထားတာပါ။
- ပညာရေးအတွက်အခကြေးငွေပေးရခြင်းမရှိပဲ မူလတန်းနဲ့ မူလတန်းလွန်ကျောင်းတွေက မတက်မနေရဖြစ်ပါတယ်။ တသီးတခြားကျောင်းတွေကတော့ နိုင်ငံတကာ Baccalaureate ၊ UK သို့မဟုတ် US သင်ရိုးတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
- PISA League ဇယားထဲမှာတော့ ဟောင်ကောင်ရဲ့ တက္ကသိုလ်ပညာရေးက တရုတ် (ရှန်ဟိုင်း၊ ပေကျင်း၊ ကျန်းစု၊ ကွမ်တုန်း) နဲ့ အတူတူမဟုတ်ပဲ သီးသန့်ပါဝင်ဖြေဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
- တောင်ကိုးရီးယားကတော့ ထိပ်တန်းကမ္ဘာ့ academic achievers တွေထဲက တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်လာတာ ကြာပြီဆိုပေမယ့် ဒီလိုဖြစ်လာဖို့က ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ကျောင်းချိန်အကြာကြီးပေးပြီးတော့မှသာ ဖြစ်လာတာပါ။
- ကျောင်းတော်တော်များများက မနက် ၈ နာရီမှာစပြီး၊ အဲ့ဒီကနေတခါ ပုဂ္ဂလိက study clubs တွေကို ဆက်သွားပါတယ်။ (မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် ကျောင်းပြီးတာနဲ့ ကျုရှင်ဆက်တက်ဖို့ အချိန်ပေးရသလိုမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။)
- နယူးဇီလန်ရဲ့ ကျောင်းသင်ရိုးတွေက UK နဲ့ မတူတာ မဟုတ်ပေမယ့် ဒီက ကလေးတွေက အသက် ၆ နှစ် မပြည့်မချင်း ကျောင်းစတက်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ နိုင်ငံထဲမှာလည်း အစိုးရထောက်ပံ့ထားတဲ့ တက္ကသိုလ် ၈ ခုရှိပြီး ဘာသာရပ်တော်တော်များများမှာ ဒီဂရီတွေ ပေးပါတယ်။
- တရုတ်နိုင်ငံက PISA Ranking ထိပ်ပိုင်းကို တက်လာတာက မကြာသေးမှီနှစ်များက ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ တရုတ်အစိုးရရဲ့ ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ (reforms) ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
- Reforms ထဲမှာ စာသင်ကြားပို့ချမှု နည်းလမ်းများ၊ ကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုစနစ်၊ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နဲ့ safeguarding mechanisms ပါဝင်ပါတယ်။
- တရုတ်ရဲ့ အခြေခံပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုက ၂၀၀၁ ခုနှစ်က စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီးတော့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမှုပုံစံတွေမှာလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။
Source: Independent, NCES, OECD
International/Private Read 1725 times